China lafiny telo kitapo Manufacturers tombo-kase sy ny Suppliers | DingQi
Inona no tiana holazaina amin'ny lafiny telo paosy, dia ny kitapoko welded amin'ny lafiny telo. Lafiny iray dia hijanona hisokatra mandritra ny famokarana. Amin'izany fomba izany, ny mpividy dia afaka hametraka ny vokatra amin'ny kitapo, ary avy eo mampiasa hafanana famehezana mba asio tombo-kase ny fanokafana ny harona.
Matetika, vacuum fonosana ilaina nandritra ny telo-misy rindrina bagging, izay ihany koa ny tena antony maro samihafa. Indraindray dia mety ho sakafo mba hisorohana fahasimban'ny, indraindray dia mba hahatonga ny fiainana talantalana intsony. Vacuum fonosana ihany koa fantatra amin'ny anarana hoe decompression fonosana. Ny tena tanjon'ny vacuum fonosana dia ny hanesorana ny rivotra avy amin'ny harona ary asio tombo-kase izany, ka ny kitapo foana amin'ny avo decompression state.The vacuum lafiny telo fonosana voaisy tombo-kase ny kitapo no tena ampiharina amin'ny vokatra elektronika (antistatic) sy makiazy (indrindra ny saron-tava, fikarakarana sasany hamandoana sy ny fikarakarana fampisehoana hoditra tsara) sns.
Tsy izay ihany, ny fampiasana ny telo-misy rindrina fonosana fitaovana manana ambany very, tsara famehezana fampisehoana, avo sakana, ambany oksizenina permeability sy ny hamandoana, hamandoana-porofo, ny loto-porofo, taratra-porofo, anti-harafesiny, mamirapiratra sy azo ampiharina tarehy, tsy misy poizina, odorless mifanaraka amin'ny fitsipika pirenena.
Ny zavatra afaka hikasika dia: Kraft taratasy, taratasy fotsy, PET / PE, Nampandamòka an'izany. Ny ara-nofo ao anaty ny kitapo dia PE amin'ny fiarovana.
Raha toa ka mila kitapo, tsidiho ny tranonkala Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba amam-panao mamorona anao manokana kitapo, na misalasala ny mifandray aminay. Dia hanome teny nalaina ho anareo raha vao araka izay azo atao.
Kraft Paper Resealable Bags , Mijoroa paosy Bags , Mijoroa paosy fonosana , Clear Plastic Mijoroa Up Pouches , Mijoroa Up paosy fonosana plastika , Clear Mijoroa Up Pouches ,